Zilant - အ Fantasy MMORPG (Zilant - The Fantasy MMORPG) - 2Game
Zilant ခုနှစ်, သငျသညျကွောကျရှံ့ဖှယျအလှတရား၏လောကဓာတ်ရှာဖွေစူးစမ်းတဲ့ပျံစစ်သည်တော်, ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရန်သူလူမျိုးတစ်ဦးနဂါးစစ်ပွဲအားဖြင့်တူသည်ဝမ်းခွဲနေကြသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အတောင်ပံပေါ်ပျံဝဲ! အတှေ့အကွုံထိပ်ရန်သင့်မြင့်တက်ပေါ်ပွေးညီ-အစာရှောင်အရေးယူထုပ်ပိုးတိုက်ခိုက်ရေး, သင်မိကျောင်းကိုလိုက်ရှာအဖြစ်ကွပ်မျက်အကြီးအကဲတွေ, သင်၏ရန်သူတို့ကိုအနိုင်ယူနှင့်လုပ်အားခစစ်။ အသစ်စိတ်ကူးယဉ်စောင့်ကြို!
– အကျင့်စာရိတ္တပျံသန်း trilling နှင့်အတူမိုဃ်းတိမ်မှတဆင့်ပျံဝဲ
– နှလုံး-pounding ကျွမ်းကျင်မှု-based တိုက်ခိုက်ရေး
– ပြင်းထန်သော PvE နှင့် PvP Modes သာ (Arena mode ကို, Guild, အွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်း mode ကိုနှင့်ပိုပြီး vs အစည်းအရုံး)
သင့်ကိုယ်ပိုင်အတောင်ပံပေါ်ပျံဝဲ! လေယာဉ်တိုက်ခိုက်ရေး, Quest များ, ရှာဖွေရေးနှင့်ရိတ်သိမ်းဖို့အသစ်တစ်ခုကိုသှငျအပွငျကထပ်ပြောသည်။ အံ့ဖှယျ Hollaender ကုန်းတွင်းပိုင်းလောကီသားတို့သည်အမှတဆင့်ခရီးနှင့်သင်နှစ်သက်သောချိုးဖဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်နိုင်ရန် dragonlike Zilant ကျူးကျော်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲကိုယူပါ။
အတန်းအထူးသဖြင့်တစ်ဦးတိုက်ခိုက်ရေးအခြေအနေမှာ, အခြေခံအရည်အချင်းများနှင့် Zilant ၌သင်တို့၏အကျင့်စရိုက်၏အခန်းကဏ္ဍသတ်မှတ်။ နဂါး Rider, Oracle က, Archer, တမန်တော်မြတ်: သင်စတင်လေးကနေတဦးတည်းအတန်းအစားကိုရွေးချယ်ပါ။
အံ့မခန်းတဦးတည်း-to-တဦးတည်းနှင့်အဖွဲ့ကိုစစ်ကူများနှင့် 30 နီးပါးကမ္ဘာကြီးအကြီးအကဲတွေ & ထောင်ထဲကကျော်အောင်မြင်မှု။ သင့်ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်ယူဖို့ combo, ကျွမ်းကျင်မှုသံကြိုး, တန်ပြန်နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဝေဟင်နည်းဗျူဟာကိုသုံးပါ။
တစ်ဦးစတိုင်ကြေညာချက် Make နှင့်ပေါက်နှင့်ကို item စိတ်ကြိုက်ထံမှဂီယာ၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးအားဖြင့်သင်တို့၏အကျင့်စာရိတ္တကိုစိတ်ကြိုက်။ အသစ်သောလက်နက်များဆည်းပူးခြင်းနှင့်သင်သည်သင်၏အဆင့်တိုးမြှင့်အဖြစ်အသစ်သောပစ္စည်းများဝင်ငွေ။
function အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ & mount
ဂဏန်းအတွက်အစွမ်းသတ္တိကိုရယူပါ။ join သို့မဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများ၏အားသာချက်ယူနေတဲ့ကို Legion of Honour ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
မိုဘိုင်းပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမြင့်ဆုံးမှတက်မြေပြင်ကနေတညျဆောကျအထူးဂိမ်းအင်ဂျင်ကို။ optimized Touch ကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူကြီးကျယ်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကွင်းဆက်အကြီးအကျယ် combo တိုက်ဖျက်မည်။
နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်ကြေငြာချက်များဘို့ငါတို့အရာရှိတဦးက Facebook စာမျက်နှာနှင့် website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
တရားဝင် Facebook မှ: https://www.facebook.com/ZilantOnline/
Android အတွက် Zilant – အ Fantasy MMORPG (Zilant – The Fantasy MMORPG) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ Zilant – အ Fantasy MMORPG (Zilant – The Fantasy MMORPG) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, Zilant – အ Fantasy MMORPG (Zilant – The Fantasy MMORPG) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် Zilant – အ Fantasy MMORPG (Zilant – The Fantasy MMORPG) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ Zilant – အ Fantasy MMORPG (Zilant – The Fantasy MMORPG) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် Zilant – အ Fantasy MMORPG (Zilant – The Fantasy MMORPG) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!